Mkpụrụ ego abụọ kacha mma n'ụwa jikọtara akụkọ ihe mere eme na ọdịnihu n'udo
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » Mkpụrụ ego abụọ kacha mma n'ụwa jikọtara akụkọ ihe mere eme na ọdịnihu n'udo
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Mkpụrụ ego ndị mara mma nke Italy
Otu Editorial Project Group na mmekorita ya na ulo akwukwo Poligraphic nke Zecca dello Stato na Rome (Itali State Mint) weputara ozi di nma site na nka nke ichikota.
Na 2017 na Berlin, a na-enye mkpụrụ ego "Afọ 70 nke Udo na Europe" nke Italian State Mint na-enweta dị ka mkpụrụ ego kachasị mma n'ụwa.
Ọ bụ nkwanye ùgwù nke imepụta ihe na Ịtali maka ihe osise mara mma na maka ịdị mma nke ibipụta na imecha.
Ya mere Progetto Editoriale nwere mpako iwepụta mmeputakwa pụrụiche.
Mmeputakwa a sitere na nke mbụ site na ngalaba ime nka nke nka nka nke Istituto Poligrafico e Mint dello Stato nke emepụtara na mbipụta ọnụọgụ na nke agbaziri agbaziri, iji nye ihe akaebe zuru oke na mgbasa ozi na nnukwu ihe omume akụkọ ihe mere eme nke emetụbeghị mbụ n'ime Kọntinent ochie.
Mma, ihe ijuanya, akụkọ ihe mere eme, udo, nkà, omenala - ndị a bụ ihe ndị na-ejikọta ọnụ na ogbako ngosi na Mint Museum na Rome nke ihe nrite abụọ nke ihe dị ịrịba ama nke a mụrụ site na mmekorita n'etiti Progetto Editoriale Publishing House na State Mint.
Ndị na-ekwu okwu maka mmemme ahụ bụ onye isi ọrụ Editorial, Francesco Malvasi; Eng. Matteo Taglienti, Onye isi nke Mint na mmepụta ihe nka na-enye ndị na-emepụta ihe na Integrated Solutions Development Department of Poligrafico; Ing. Antonio Cascelli, Director nke State Mint osisi na site Gino Capponi; na Franco Salvatori, Onye isi oche nsọpụrụ nke Italian Geographic Society.
Ebe ahụ bụ ebe pụrụ iche na nke pụrụiche, nke na-emeghe ọha na eze na oge pụrụ iche maka ihe omume dị mkpa. Ụlọ ihe ngosi nka nke Mint nke Rome, nke amụrụ na mmalite narị afọ nke iri na itoolu dị ka Numismatic Cabinet nke ụlọ ọrụ ego nke papal ma nyefee ya n'aka Alaeze Ịtali na 1870, nwere ezigbo akụ: mkpụrụ ego, nrite, cones, punches, wax ụdị, na ụdị. mbipụta nke mkpụrụ ego na nrite ọ bụla ewepụtara ọhụrụ.
Ọ bụghị nanị nke ahụ, a pụrụ ịhụ ígwè ọrụ oge ochie maka ịrụ ígwè na mmepụta nke mkpụrụ ego na ihe nrite, pantograph nke narị afọ nke iri na itoolu, na ngwá ọrụ e ji mee ihe na ngalaba dị iche iche nke Mint Ịtali nke e wuru n'ugwu Esquiline (ógbè Rom) na 1911 n'ebe a.
Site na "mkpụrụ ego kachasị mma n'ụwa" na nrite a raara nye Udo na Europe, e mepụtara ụzọ na 2015, mgbe a mụrụ otu mkpụrụ ego euro 10 maka isiokwu nke udo site na ihe okike nke Maria Carmela Colaneri, onye na-ese ihe. Ụlọ akwụkwọ nke Medal nke IPZS (State Mint Polygraphic Institute) n'oge agha ikpeazụ na Europe. N'afọ 2017, a na-enye mkpụrụ ego ahụ dị ka ihe kachasị mma n'ụwa, na-eme nke ọma n'ime atụmatụ nke 40 mba mint ndị ọzọ, na 2019, a na-emezigharị primacy na St. Petersburg.
Ugbu a, mkpụrụ ego euro 10 enweghị ebe a na-ahụ ya, ọnụ ahịa ahịa ya na-abawanye mgbe niile. Na 2020, afọ dị egwu nke ọrịa na-efe efe, Progetto Editoriale kpebiri site na nkwekọrịta nkwekọrịta ya na IPZS iji gosipụta etiti udo, nchekwa na ịdị n'otu obodo site na ntụgharịghachi ego “afọ 70 nke udo na Europe”.
Nkà mmụta ihe osise nke Silvia Petrassi amụwo ihe nrite ọhụrụ nwere otu ihe nnọchianya na akara, na ebumnuche nke na-akpali akpali oge ntụgharị uche na mmata n'ime usoro geopolitical mba ụwa dị oke egwu nwere ọtụtụ ajụjụ maka ọdịnihu.
Kedu onye akụkọ ihe mere eme, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke Frederick II nke Swabia, nwere ike itinye ụkpụrụ udo nke ọma? Eze Ukwu nke Alaeze Ukwu Rom Dị Nsọ, Eze Sicily na ọtụtụ ebe ndịda Ịtali, bụ n'ezie onye nwere omenala na onye nwere anya nke ọma, onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere ezi uche na nke ọhụrụ, nwere mmasị na akwụkwọ na nkà, nke mere na ọ nwetara aha njirimara nke Stupor Mundi.
Otu aha ahụ ka e nyere Medal n'ụdị mkpụrụ ego, nke Remo Carboni kere na Mint Ịtali, nke e nyere ya na Nrite Udo.
Onye na-ese ihe dọtara mmụọ ya ozugbo site na Augustal, mkpụrụ ego ọla edo oge ochie ewepụtara na 1231 ma rara ya nye Frederick II. Ihe odide ahụ gosipụtara profaịlụ nke Emperor n'ụzọ nke Siza, nke e ji laurel kpuchie okpueze, ebe n'azụ ya gosipụtara ugo Rom nke e dere FRIDERICVS.
N'ịkọwagharị ugbu a, effigy e gosiri na obverse ejirila akara akụkọ ihe mere eme a ma ama nke eze dochie anya ya, ọ dịghị mgbe a na-emepụtaghachi ya n'ụzọ dị otú a, ebe e megharịrị azụ dị ka ihe na-adọrọ mmasị dị ka nke mbụ.
Ngosipụta nke ihe nrite abụọ a, ya mere, na-anọchite anya njem site na akụkọ ihe mere eme nke Italy na Europe, na-eme ka ọnọdụ dị oké ọnụ ahịa nke Mint Museum na-enye, bụ ebe nke na-egosi omenala oge ochie nke Mint Italian State, bụ nke aghọwo taa nkà na ụzụ. na ihe nlereanya avant-garde ka ọ na-ejigide mmụọ nka na nka ya mgbe niile.
"N'iburu n'uche ihe ndị mere n'oge na-adịbeghị anya na Middle East, Northeast Asia, Africa, na Afghanistan, otu anyị ekpebiwo ịmepụta ihe nrite a raara nye maka udo na ụkpụrụ ndị na-adabere na nke a," ka Francesco Malvasi, Director nke Progetto Editoriale kwuru. "Anyị jikọtara ya na ịmepụta mkpụrụ ego efu, Stupor Mundi, otu obere ihe osise nke nwere nnukwu mkpa. Nkwenye imewe a dị oke mkpa na-anọchite anya ezigbo onyinye anyị nyere ndị nwere ike ịmata, anyị na-atụ anya, dị ka ụkpụrụ nduzi maka Europe siri ike, nnabata, ịdị n'otu, na nkwado, ebe ntụnyere na ntụnyere maka mba na ndị mmadụ niile nke ụwa. "